INkosana uHarry ibuyela ekhaya eMeghan Markle eMontecito emva koMngcwabo - Indumasi
Eyona Indumasi INkosana uHarry sele ibuyele eCarlifonia
INkosana uHarry sele ibuyele eCarlifonia
INkosana uHarry ibuyele eCalifornia.
Emva kweentsuku ezilithoba e-UK, iNkosana uHarry ibuyele eCalifornia. I-Duke yaseSussex ibuyile eMelika izolo, emva kokuya e-UK ukuya kumngcwabo weNkosana uPhilip.
INkosana uHarry yayihlala inenjongo yokubuyela kwikhaya layo elitsha eMontecito ngokukhawuleza, njengoko yayifuna ukubuyela kuMeghan Markle, okhulelwe umntwana wesibini wesibini kwaye engakwazi ukuya e-UK kwinkonzo yesikhumbuzo sikaDuke wase-Edinburgh, kunye unyana, u-Archie.
Bhalisa kwi-Royals Newsletter ye-Braganca INkosana uHarry kunye neNkosana uWilliam bahlangana kwakhona kumngcwabo weNkosana uPhilip.
Uhambo lweNkosana uHarry oluya e-UK lwaphawula ixesha lakhe lokuqala ukubuyela echibini kwisithuba esingaphezulu konyaka, kunye nexesha lakhe lokuqala ukuza ubuso ngobuso nosapho ukusukela Udliwanondlebe oluzaliswe ziibhombu eSussex kunye no-Oprah Winfrey .
Kwakukho amarhe okuba uMlawuli waseSussex uya kongeza uhambo lwakhe e-UK ngolungelelwano ukubona uKumkanikazi uElizabeth kwimini yokuzalwa engama-95 namhlanje , kodwa wagqibela ngokubhabha ubuyela eCalifornia nge-20 ka-Epreli, kwindiza yorhwebo yaseMelika. INkosana uHarry yahlala kwakhe naseMeghan kwindawo yokuhlala yase-UK, eFrogmore Cottage, ngelixa ebuyela ekhaya, kwaye IHarper's Bazaar , ukwazile ukubona iPrincess Eugenie kunye nonyana wakhe osandul 'ukuzalwa, Agasti, emva kweentsuku ezintlanu zokuba yedwa emva komgaqo we-coronavirus.
INkosana uHarry nayo yakwazi ukudibana ngasese nogogo wakhe amaxesha amabini ubuncinci kuhambo lwakhe; ukumkanikazi Uhleli eWindsor castle , ekunene yiFrogmore Cottage. INkosana uHarry yadibana nomakhulu wayo ngasese kuhambo lwakhe.
INkosana uHarry yenza njalo ncokola noPrince William kunye neNkosana uCharles emva komngcwabo weNkosana uPhilip , nangona nganye IHarper's Bazaar , iingxelo zeentetho zoxolo kunye neengqungquthela zosapho bezikude kakhulu. Umthombo uxelele iphuma ukuba olu hambo yayilixesha elijolise kusapho malunga nexesha uhlonipha utatomkhulu wakhe kwaye uxhasa ukumkanikazi kunye nosapho.
Ukuqhekeka okubhalwe kakuhle kwabazalwana akukaphili ncam okwangoku, ngeli xesha usapho lwalukwazi ukubeka nayiphi na ingxaki kunye noxinzelelo Ngexesha elibuhlungu , Imicimbi engekenziwa ayikathethiswa nangayiphi na indlela. INkosana uHarry ngoku isekhaya eMontecito kunye neDuchess Meghan.Iphuli / Samir Hussein / WireImage
INkosana uHarry iya kuba nelinye ithuba lokuthetha nosapho lwayo buqu kwakhona ngeli hlobo, kuba ngoku icwangcisela ukuya eLondon ukuyokutyhilwa komfanekiso oqingqiweyo yena kunye neNkosana uWilliam bayalela imbeko ku-Princess Diana .
'Scream Queens' iNkulumbuso Recap: Ubomi bamaGrike nokufa
Ngomhla wokuzalwa okwenene waseWashington, Ukukhumbula uJames K. Polk
Robert Greene kwi 'The 48 Laws of Power,' Ukwamkela isithukuthezi, Ukusebenza ne-50 Cent
Nantsi into eyenzekayo ngeComedy Central ekusasazeni
UMichael Steele Uphendula ngokuThukisa ubuhlanga okuchaphazelwe nguMlawuli wezoNxibelelwano zeCPAC
IJill: Iqela eliphambili lokuThengisa likaMiami ngumona wabaKhuphiswano
Nantsi Idatha yokuBukela kwiiMuvi ezinkulu zoSasazo ze-Q2 2021
'I-Spider-Man: Kude neKhaya' Izama ukukuphazamisa ekuboneni ukuba ziintoni ezi ziMovie
Imiyalelo kaGqirha: Sela iikomityi ezintathu zeTi eluhlaza ngoku
U-Eminem uqhubeka nokuhlasela uDonald Trump
Ngaba uForte Uzoxolisa Ngeziqhulo Zobhubhane 'Kumntu Wokugqibela Emhlabeni'
'Amagcisa' Isiqendu 3 Ukuphindaphinda: I-Squat-Mancers
'URay Donovan' Redux: Phinda ubuye 2 × 9 - 'Iqhwa'
Isony kunye ne-disney spiderman deal
nini usuku lokuzalwa kwamasango
ndifuna ukuba ngumkhaphi
Amakristu amnyama athandana simahla
Unyango losulelo lwebacteria ngaphandle kwamayeza okubulala iintsholongwane
ixabisa malini isihogo ngeveki